Blaz agere pagomo
Vamwe blaz heard that there was a competition ye >>>>> hombe. Muface, akafunga
zvokumbofamba achienda kun'anga. N'anga yakakudza blambi yake kuti aimonere
musana wese, akabva afunga zvekunanga kucompetition. Zvino arikufamba zvake
achizvidhonza nokuti aifunga kuti ndini wacho wavaitsvaga, akasangana ne
mumwe ainge aine yake mubhara achibva kwainge kune ma competitions.
Achishamisika muface akabvunza kuti nei, akanga arikudzoka and yet akanga
aine yake yainge iri mubhara.
Muface uyu akabva angodzungudza musoro wake wake ndokuti, "Urikuona muface
akagara apo uyo?", ndokupindurwa achinzi ehe. Akaenderera achiti "uyo
anenge akagara pagomo apo?", ndokupindurwa chinzi ehe. Akenderera achiti,
"HARISI GOMO IRO, AKAGARA PANE YAKE"